Maraykanka oo Katherine Dhanani u magacaabey Safiirkooda Soomaaliya 24 sano kadib • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maraykanka oo Katherine Dhanani u magacaabey Safiirkooda Soomaaliya 24 sano kadib
Maraykanka oo Katherine Dhanani u magacaabey Safiirkooda Soomaaliya 24 sano kadib
February 25, 2015 - By: Mohamed Dacar
Dalka Maraykanka ayaa safiirkiisii ugu horeeyey ee muddo 24 sano ka dib u soo magacaabay Dalka Soomaaliya sida lagu cadeeyey warka soo baxay Afhayeenka wasaarada Arrimahada Dibada Jen Psaki.
Warka ayaa lagu cadeeyey in madaxweynaha Maraykanka Obama u gartay in uu safiirka Soomaaliya u magacaabo Katherine Dhanani oo ah haweenay in badan ka soo shaqaysay dalal badan oo Africa ku yaala.
Afhayeenka wasaarada Arrimaha Dibada ayaa sheegtay in magacaabidan ay tahay mid taariikhi ah oo muujinaysa in dalka Soomaaliya uu ka baxay dagaalo iyo colaado in badan jiran, wuxuuna sheegay in ay qirayaan in hormar ka jiro Soomaaliya.
“Magcaabistan taariikhiga ahi waxay muujinaysaa xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Somalia iyo Maraykanka, waxay caddeyneysaa in aan ka markhaanti kacno horumarka ay samaynayaan dadka Soomaaliyeed ee ka soo baxaya sannado badan oo ay halkaasi ka jireen colaado” Ayey tiri Jen Psaki.
Jen Psaki ayaa sheegtay in Dowladda Soomaaliya looga baahan yahay fulinta shaqooyin badan oo horyaala si ay u gaarto Soomaaliya dal u dhamaystiran hay’adihii dowliga ahaa, waxayna caddeysey in maraykanku sii xoojinaayo taageerada Soomaaliya.
“Dowladda Soomaaliya waxaa horyaala shaqo badan oo ay tahay inay dhamaystirto si ay uga baxdo xaaladda kala guurka isla markaana ugu guurto qaran barwaaqo, nabad iyo dimoqraadiyad, Dalka Maraykanka waxaa ka go’an inuu ku taageero isla markaana ku garab galo Soomaaliya hayaankoodaas sida saaxiibo isu samra oo kale” ayey tiri Spaki.
Katherine Dhanani atyaa kahbiir dhanka arrimaha Afrika ah, waxaana muddooyinkii danbe ay ahayd safiirka Maraykanka u fadhiya dalka Hindia iyo sidoo kale sanadihii ka horeeyey 2010kii ka soo shaqaysay dalalka Zimbabwe 2007-2010 iyo dalka Gabon 2005-2007 waxayna shaqadeeda diblumaasi ka shasoo shaqaysay dalal badan oo ku yaala Africa.
Hadii aqalka Shuyuukhda ee maraykanku ansixiyaan Safiirkan loo magacaabay Soomaaliya Amb. Katherine ayey noqonerysaa Safiirkii u horeeyey ee si rasmi ah maraykanku ugu magacaabo Soomaaliya kadib markii ay ciidamadooda kala baxeen sanadkii 1993, halkaas oo ay dagaal kula galeen ururka USC ee uu hoggaamin jirey Gen. Caydiid. Waxaa maraykanka uga dhintey Muqdisho 18 Askeri, inkasta oo ay Soomaalida ka dileen dileen dad ku dhaw 1000 qof.